ရေငန်ကုသမှုစနစ် (HMJBKRO စီးရီး) - တရုတ် Xi'an Homey နည်းပညာ
ရေငန်ကုသမှုစနစ် (HMJBKRO စီးရီး)
မြင့်မားတဲ့ဆားငြင်းပယ်ခံရဒီယူနစ် 70% နူန်းကျော်ကျော်ပြန်လည်နာလန်ထူမှုနှုန်းနှင့်အတူ 7000ppm ၏ TDS နှင့်အတူရေငန်ကုသရန်အသုံးပြုသည်ငန်ပြောင်းပြန် osmosis system ကို 3000GPD ။ စနစ်၏အဓိက conponents မြင့်မားဆားငြင်းပယ်ခံရခြင်းနှင့်နိမ့်စွမ်းအင် sonsume unit.With ကာဗွန် filter ကိုများနှင့်ရေငန် desalination activated ပေါင်းစုံမီဒီယာ filter ကို, သူကလည်းလွယ်ကူပါတယ်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြစ်ပါသည်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကောင်းနှင့်အတူအသိအမှတ်ပြုအီးဖြစ်ပါတယ်။ အကျဉ်းချုပ်နိဒါန်း: တွက်ချက်ခြင်းနှင့်တူအောင်ဖန်တီးရန် 1, အသုံးပြုမှု DOW FILMETEC ဒီဇိုင်းဆော့ဖ်ဝဲ, ...
ကုန်ကြမ်းရေ TDS: 15000ppm အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော
output ရေ TDS: 600ppm ထက်လျော့နည်း
Frame က: ကာဗွန်သံမဏိ
မြင့်မားတဲ့ဆားငြင်းပယ်ခံရငန်ပြောင်းပြန် osmosis system ကို 3000GPD
ဤသည်ယူနစ် 70% နူန်းကျော်ကျော်ပြန်လည်နာလန်ထူမှုနှုန်းနှင့်အတူ 7000ppm ၏ TDS နှင့်အတူရေငန်ကုသရန်အသုံးပြုသည်။ စနစ်၏အဓိက conponents မြင့်မားဆားငြင်းပယ်ခံရခြင်းနှင့်နိမ့်စွမ်းအင် sonsume unit.With ကာဗွန် filter ကိုများနှင့်ရေငန် desalination activated ပေါင်းစုံမီဒီယာ filter ကို, သူကလည်းလွယ်ကူပါတယ်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြစ်ပါသည်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကောင်းနှင့်အတူအသိအမှတ်ပြုအီးဖြစ်ပါတယ်။
တွက်ချက်ခြင်းနှင့်တူအောင်ဖန်တီး, ဒီဇိုင်းအတွက်သီအိုရီ guidline ပေးဖို့ 1, အသုံးပြုမှု DOW FILMETEC ဒီဇိုင်းကို software ကို
2, အစာကျွေးခြင်း, ရေအရည်အသွေးနှင့်လိုအပ်သည့်စွမ်းရည်သည်နှင့်အညီ, အ B2K စီးရီးဆားအကြောင်းအရာ 5000ppm-15000ppm အတူကုန်ကြမ်းရေသက်ဆိုင်များမှာကွဲပြားခြားနားသောစနစ်များကိုဒီဇိုင်း။ ဆားအကြောင်းအရာ 15000ppm အထက်ရှိပါက pls ပင်လယ်ရေများအတွက် SW စီးရီးကိုရှေးခယျြ
3, system ကိုအမြှေးပါးညစ်ညမ်းမှုလျှော့ချရန်ရပ်သည့်အခါရေချိုနှင့်အတူအမြှေးပါးအတွင်းအာရုံအစားထိုးထူးခြားသောလတ်ဆတ်တဲ့ရေအလိုအလျောက်အစားထိုးကိရိယာထို့ကြောင့်ဝန်ဆောင်မှုဘဝနှင့်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ရှည်။
4 ရွေးချယ်မှုများအတွက်ကာဗွန်သံမဏိကုတ်အင်္ကျီနှင့်သံမဏိဘောင်, ဘီးကွဲပြားခြားနားသော installation ကိုအခွအေနေအဘို့ကို install နိုင်ပါတယ်ရွေ့လျား
မြင့်မားသောဖိအားအောက်တွင်အဘယ်သူမျှမယိုစိမ့်နှင့်အနိမ့်ချေးသေချာစေရန်အရည်အသွေးမြင့်နှင့်အတူ 5, သံမဏိနှင့် SCH80UPVC ပိုက်လိုင်းများ
power supply, optional ကိုများအတွက် 50Hz / 60Hz 220 / 380V ဖြစ်ပါတယ်။ frame ကိုရွေးချယ်နိုင်ကာဗွန်သံမဏိနှင့်သံမဏိဖြစ်ပါတယ်။
HMJBK9RO 9000ppm ထက်လျော့နည်းသည့် TDS အတူကုန်ကြမ်းရေကုသရန်ရန် seires-
HMJBK15RO seires- 15000ppm ထက်လျော့နည်းသည့် TDS အတူကုန်ကြမ်းရေကုသရန်ရန်
1.DOW အမြှေးပါး 2.FRP ဖိအားရေယာဉ် 3.sediment filter ကို 4.SS centrifugal မြင့်မားသော presure စုပ်စက်
စနစ်က 6. လတ်ဆတ်တဲ့ရေကိုအစားထိုးစနစ်က 5.cleaning 7. ကာဗွန်သံမဏိအင်္ကျီကိုဘောင်
1.multi မီဒီယာ filter ကိုကာဗွန် filter ကို 3.stainless သံမဏိဘောင် 2.activated
ယခင်: စံ ro ရေကုသမှုစနစ် (HMJRO-6000LPH)